रोचक जानकारी – Page7– MeroJilla.com
काखी कालो भए यसौ गरौं भिडीयो सहितको तरीका Saturday, January 20th, 2018
एजेन्सी – काखीको रंग कालो हुनु कुनै किसीमको रोग होइन । यो सूर्यको पराबैजनी किरणको परिणामस्वरुप पनि हुने गर्छ । यसका साथै काखीको रौं खैरिनु र मरेको छालाको कारणले गर्दा पनि काखी गाढा रंगको हुने गर्छ । यस समस्याबाट छुट्कारा पाउनको लागि तपाईंलाई आज हामी निकै नै सरल उपायको बारेमा जानकारी दिन्छौं । यसको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस् । काखी कालो भएर लाज लाग्छ खुल्ला हिड्न, त्यसोभए..
के तपाइको ‘दिमागमा यौनको कुरा मात्र खेलिरहन्छ’ किन कारण यस्तो छ
म २५ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । मलाई हस्तमैथुन गर्न मन लागिरहन्छ र मेरो दिमागमा यौनको कुरा मात्र खेलिरहन्छ । के यो रोग हो रु यो समस्याको हल के छ रु म चार–पाँच महिनामा एक दिन कुनै केटीसँग सेक्स गर्छु । त्यो एक रातमा चार पटक यौनसम्पर्क हुन्छ । के यो स्वास्थ्यका लागि ठीक हो रु यौनसम्पर्क गर्दा किन मेरो अण्डाशय दुखेर आउँछ रु यौनेच्छाको सञ्चालन र व्यवस्थापन हामी सबै नै यौनिक..
न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्रीद्वारा गर्भवती भएको घोषणा, संसारभरि चर्चा र बधाई
न्यूजिल्याण्ड । न्यूजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्याकिन्डा आर्डेनले आफू गर्भवति भएको सार्वजनिक गरेकी छिन् । शुक्रबार घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री जाकिन्डाले आफू र श्रीमान क्लार्के गेफोर्डले यसै जुनमा बच्चा पाउने बताएकी हुन । सिएनएनमा प्रकाशित समाचारमा क्लार्कले बच्चा पाउने कुराले आफू औधी खुशी भएको बताएकी छिन् । “आउँदो जुनमा हामी दुईवटा तीन हुने कुराले क्लार्क र म..
एउटा फोटोले हिरोइन बनायो दीपिका प्रसाईलाई
फोटोग्राफर गौतम धिमालले खिचेको तस्बिर यही हो जसले दीपिकालाई आज हिरोइन बनायो । अभिनेता रमेश उप्रेतीको ड्रिम प्रोजेक्ट ‘ऐश्वर्य’ बाट नेपाली फिल्म क्षेत्रमा भित्रिएकी हिरोइन हुन्– दीपिका प्रसाईं । एउटै फिल्मले उनलाई चर्चामा ल्यायो, सबैको चासोमा पार्यो । ‘ऐश्वर्य’मा उनलाई काम गराउनकै लागि फिल्मका निर्देशकले निकै कसरत गरेका थिए । दीपिका स्वयम् भन्ने गर्छिन्, ‘हिरोइन..
६ कक्षाकी विद्यार्थीले होस्टलमै बच्चा जन्माईन्, हेडसर गिरफ्तार Thursday, January 18th, 2018
६ कक्षामा अध्यनरत छात्राले होस्टलमै बच्चा जन्माएकि छन् । भारतको उडिसा राज्यको एक विद्यालयकि छात्राले होस्टल बच्चा जन्माएपछि उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक र होस्टल सुपरिटेन्डेन्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । होस्टलमा बच्चा जन्माए लगतै छात्रा र बच्चालाई सुटुक्क उनको गाउँ उप्परकेंडीमा पुर्याइएको थियो । आदिवासी जनजातिका बच्चाहरु पढ्ने उमुरी आश्रम..
ज्यानलाई मौसमले च्यालेन्ज गर्छ कि मदिराले
काठमाडौं, ४ माघ । ‘आज मौसमले च्यालेन्ज ग¥यो,’ मदिराप्रेमीमाझ प्रचलित यो भनाइले चिसो बढ्दा न्यानोका लागि मदिरा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । तर चिसो मौसममा बढी मदिरा सेवन गर्दा ज्यानै जाने गरेको छ । को अनुभवमा विपन्न समुदायमा चिसो हटाउने नाममा बढी मदिरा खाएर बाहिर सुत्दा धेरैको ज्यान गएको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले चिसोमा मदिराले तत्कालका लागि न्यानो..
मेस्सी तेस्रो पटक बाबु बन्दै Wednesday, January 17th, 2018
काठमाडौं ०३ माघ । दुई सन्तान पाएपछि बाल्यकालदेखिकी प्रेमिका एन्टोनिला रोकुजोसँग विवाह गरेका लियोनल मेस्सी तेस्रो पटक बाबु बन्न लागेका छन् । बार्सिलोनाका स्ट्राइकर मेस्सी अहिले आफ्नी गर्भवती श्रीमतीलाई घुमाउन दक्षिण अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । उक्त भ्रमणका क्रममा मेस्सीले आफ्नी श्रीमतीलाई दक्षिण अमेरिकाको लोकप्रिय तथा उनको टिमका साथीहरूको प्रिय पेयपदार्थ माटे ख्वाएका..
“भर्जिन किलिङ स्वेटर”ले विक्रीमा रेकर्ड राख्यो
जापानमा नयाँ फेसनका रूपमा आएको ‘भर्जिन किलिङ स्वेटर’ अनलाइनमा बिक्रीलाई राखिएको केही समयमै सोल्ड आउट भएको छ । ३ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने उक्त स्वेटरको पछिल्लो भागमा तुना राखेर घाँटीमा गोलोपन दिइएको छ । यो स्वेटर लगाउँदा युवतीको दायाँ र बायाँ भागबाट मात्र स्तन देखिन्छ भने अघिल्लो भागबाट केही पनि देखिँदैन । स्वेटरको पछिल्लो भागलाई केही तलसम्म पुर्‍याइएका कारण पछाडि..
नुहाएपछि हात खुट्टाको छाला किन चाउरी पर्छ?
नुहाएपछि हाम्रो शरिरको केही हिस्साको छाला खुम्चिने गर्छ। हात, हत्केला, औलाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिएझै हुन्छ। आखिर यसको कारण के हो? केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन्। पानीमा रहँदा हाम्रो छालाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन्। जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ।तर वैज्ञानिक भन्छन्, यो केवल ओस्मोसिस (Osmosis) मात्र होइन।..
किन काँडामाथि सुतेर प्रायश्चित गर्दैछन् यी साधु
इलाहावाद, ३ माघ । भारतको इलाहावादमा मकर मेला लागिरहेको छ । त्यही मेलाका बीचमा एक साधु भने काँडामा सुतेर प्रायश्चित गरिरहेका छन् । हजारौं श्रद्धालु मकर मेलाका लागि इलाहावाद आउने गर्दछन् । कोही पुण्य कमाउन भन्दै मकर मेलामा आउने गर्दछन् भने कोही पाप पखाल्न भन्दै आउने गर्दछन् । काँडामा सुतेका यी बाबा भने १८ वर्षको उमेरमा आफूले गरेको पापको प्रायश्चित गर्न भन्दै यो मेलामा आएका..
आफ्नो बहिनीलाई बचाउन जब ग्राहक बनेर भाई पुगे वेश्यालय Tuesday, January 16th, 2018
मनीष शाडिल्य, पटना । बिहारको बेगूसराय जिल्लाको कस्बाई इलाका बखरीमा रहेको एक युवक दलाललाई रुपैयाँ दिन्छन् । त्यसपछि एक युवतीसँग कोठामा दाखिल हुन्छन् र चार मिनेटमा नै त्यहाँबाट फर्किन्छन् । त्यसको केही समयपछि त्यही युवक प्रहरी साथमा लिएर फर्केर आउँछन् । यसपटक उनी देहव्यपारको दलदलमा फँसेकी ती युवतीलाई बचाउन आएका हुन्छन् । ती युवती अरु कोही नभएर आफ्नै बहिनी हुन्छन्..